I-China Runjin © Krunt ™ -N2000 Ukwenziwa Komshini Wokuqandisa Umshini Weqhwa | Runchen
Umshini wokuqandisa weRunjin © Krunt ™ -N2000
Hlanganisa i-slurry nomoya bese uyiqandisa ukukhiqiza u-ayisikhilimu. Umshini ungaqhubeka ngokuzenzekelayo ukhiqize okhilimu bekhwalithi efanayo. Kuyasebenza futhi ekuqandeni komhlaba kwemikhiqizo engeyona i-ayisikhilimu.
I-Frunt ™ -N2 umshini wokuqandisa oqhubekayo uhambisana ngokuphelele ne- 3-A izinga lempilo le
I-Food & Dairy Industries Supply Association, e-USA.
Uhlaka, ipuleti lokuqapha kanye namapayipi okupholisa omshini konke kwenziwa ngensimbi engagqwali. Zonke izingxenye ezixhumana nezinto zokuxubana no-ayisikhilimu zenziwe ngezinto ezingenazinsimbi okulula ukuzihlanza nokushintshanisa ngazo.
Ukufaka Umshini wokuqandisa ungaxhunywa ngqo ekunikezelweni kwamandla, umshini wokupholisa, umoya kanye nesilayidi.
Ishubhu elibandayo Ishubhu elibandayo lenziwe nge-nickel emsulwa, enodonga lwangaphakathi olu-chromium oluqinile nobuso obushelelayo, okunikeza ukushintshaniswa kokushisa okuhle nomphumela wokuqandisa osebenzayo wezinto ezihlanganayo zika-ayisikhilimu.
Ukupholisa uhlelo Ukuhlinzeka ngomthamo wokupholisa ozinzile ukuqinisekisa ukuthi okhilimu bekhwalithi yokushisa noma ukungaguquguquki. Lapho umshini umiswa noma isistimu yokupholisa ivalwa ngokuzumayo (ngokwesibonelo, ukuvala shaqa okuphuthumayo), i-ammonia defrosting eshisayo isetshenziselwa ukuvimbela ekubandeni. I-ammonia ewuketshezi kufanele ingabi nama-bubble futhi ingcindezi akumele ibe ngaphansi
kune-4 bar (58 psi). Ukushisa okuhwamukayo komshini wokuqandisa ngu -34 ℃ (-29 ℉).
Shayela Uhlelo lokushayela luhanjiswa ngqo kusuka emotweni enkulu kuya kwi-blender nge-pulley yebhande.
Ipompo lokungena nephuma Kuyinto iqembu futha igiya. Inganxephezela ukugqoka okujwayelekile ngokulungisa igebe. Ingaphezulu lompompo wensimbi engagqwali liphathwa ngenqubo ekhethekile yokunciphisa ukuguga.
Misa kancane Misa isikhashana umshini ngesikhathi sokukhiqiza ukuqinisekisa ukulahleka okuncane kwezinto zokhilimu kanye nokuqina kwekhwalithi.
2000 litre ngehora (528 US gallon)
Okukhiphayo kusekelwe ezimweni ezilandelayo:
Izinga lokushisa lokufaka i-slurry +5 ℃ (+41 ℉) Lokushisa lokukhipha kwe-ayisikhilimu -5 ℃ (+23 ℉) Ukushisa okuhwamukile -34 ℃ (-29 ℉)
Okuqukethwe kukawoyela e-ammonia <30 PPM isilinganiso sokunwebeka 100%
Isimo yesilayidi Ngokuvamile i-ice cream eshelelayo iqukethe izinto eziqinile ezingama-38%. Okukhiphayo kwangempela nokushisa okukhiphayo kuncike kwifomula ye-ayisikhilimu.
I-Frunt ™ -N2
Okujwayelekile ukwakheka Ngaphandle komklamo ojwayelekile oshiwo, I-Frunt ™ -N2 kufaka phakathi izinto ezilandelayo.
Icindezelwe umoya Lawula izinga lokukhulisa futhi I-CIP futha (uma kuhlinzekiwe) ngomoya ocindezelweyo. Ukulawula iphaneli Yonke imisebenzi yemishini yenziwa ngaleli phaneli, kufaka phakathi igeji yokulinganisa yemithwalo yemoto, i-air manometer, ipompo, inkinobho ye-ON / OFF yemoto enkulu, i-adjuster yokulawula ukupholisa nokuhamba kwepompo ye-slurry.
Impompo ukushayela Amandla wokushaja nokukhipha ipompo avela kusilawuli segesi yamagiya ngesiguquli semvamisa. Ububanzi bokulawulwa kokushintshashintsha kwejubane kwepampu yokushaja nokhipha kungasethwa kube ngu-10-100%.
Amandla we ukuxubana futha I-120-1200 litre slurry ngehora (32-317 US gallon).
Okujwayelekile izingxenye ezisele Iqoqo lezingxenye zokungcebeleka namathuluzi, amasondo ebhande asetshenziselwe ukushintsha ingcindezi yethubhu elibandayo namasondo ebhande asetshenziselwa ukunciphisa isivinini sokuxuba afakiwe.
Izixhobo ezingakhethwa ezisetshenziswa ku-Frunt ™ -N2 Impahla yokwengeza impahla
Ukupompa ngqo izinongo namaphalethi anuka kamnandi oketshezi ngaphandle kwezindaba eziqinile kufayiphu elibandayo ngokulingana.
Tee piston umphini Ixhunywe kupayipi lokukhipha u-ayisikhilimu
Ukuboniswa kwe- ukukhipha ingcindezi Ixhunywe kupayipi lokukhipha u-ayisikhilimu Ukuboniswa kwe- ukukhipha izinga lokushisa Ixhunywe kupayipi lokukhipha u-ayisikhilimu I-aerator eqhubekayo (eyakhelwe ngaphakathi)
Iqhwa ukhilimu isihlukanisi Sabalalisa okhilimu abakhiqiziwe emigqeni emibili ehlukene bese ugcwalisa okhilimu
Eziphuthumayo Ima valve Ukuze okupholisa uhlelo
UFreon uhlelo lokusebenza Ingaguqulwa ukuze isebenze kumshini wohlobo lweFreon, onethonya elincane emandleni.
Ukukhululwa valve I-TüV I-valve yokusiza kufanele ifakwe ohlelweni olujwayelekile lokupholisa ukuze luhambisane nezidingo zokupholisa zendawo.
Ukuqomisana gcina izingxenye Isetshenziselwa ukunakekelwa kwamahora angama-3000 noma ama-6000
Imoto enkulu Ama-kilowatt angama-22
Iphampu motor 1.5 kilowatt
Ukunikezwa kwamandla okujwayelekile 3-isigaba 380 V, 50 Hz Ammonia ipayipi:
Ipayipi lokubuyisa umoya langaphandle Amasentimitha angama-76 mm3
Ipayipi lokungena ngaphakathi liketshezi 20 mm3 / 4 intshi
Ipayipi lomoya elishisayo langaphandle 20 mm3 / 4 intshi
Ipayipi lamanzi langaphandle 20 mm3 / 4 intshi
Ipayipi le-valve yokusiza yangaphandle Amasentimitha angama-25 mm1
Ipayipi lokushaja langaphandle 38 mm
1.5 intshi Ipayipi elikhipha ngaphandle Amasentimitha angu-51mm2
Ipayipi lokungena lomoya langaphandle 12 mm 1/2 intshi
Ukusetshenziswa komoya 3.5 m3/ h 124 amayintshi ama-cubic / h
Langaphambilini Umshini wokuqandisa we-Runjin © Krunt ™ -N1200
Olandelayo: I-Runjin © Krunt ™ -EX800 Umugqa Wokuqothula Nokusikwa Kwe-Ice Cream
Umshini wokuqandisa we-Runjin © Krunt ™ -N1200
Umshini wokuqandisa we-Runjin © Krunt ™ -N300
Umshini wokuqandisa we-Runjin © Krunt ™ -N1000
Umshini wokuqandisa weRunjin © Krunt ™ -N50
Umshini wokuqandisa we-Runjin © Krunt ™ -N600